02-10-2011 04:20 PM #21
oHjzLZ&yfNrdKUe,f? ]pufpJurf;ajc} rS tjyef vrf;rwpfae&m
rGefjynfe,f? oHjzLZ&yfNrdKUxJ&dS ]AdkvfppfocsØKif;O,smOf} rS tkwfeH&H*lav;rsm;
**** 'DyHkawGvnf; roxHkol&JU "gwfyHkawGygyJ ulwif ay;vdkufwmyg ****
aprilcold, fridayborn, GreenHat, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, komoegyi, Mahuya, Mini_Me, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, THIHA, ttaswo, winekyaw, Winnermann
02-14-2011 01:10 PM #22
တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ ခုရိုက်ထားတဲ့ ပုံဟာဘယ်မှာတွေ့လို့ရိုက်ထားတာလဲခင်ဗျာ။
စစ်အတွင်းကျဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားစစ်သည် တွေရဲ့ သံဖြူဇရပ် " စစ်သင်္ချိုင်း " လား ဒါမှမဟုတ် " စစ်ဗိုလ် သင်္ချိုင်းဥယဉ် " လား ?
" စစ်ဗိုလ် သင်္ချိုင်းဥယဉ် " ဆိုတာ သတ်သတ်ရှိတာလား ? ဒါမှမဟုတ် ဒီနှစ်ခုအတူတူဘဲလား ?
စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ၊ တကယ်မသိလို့ပါ။ ကျနော်လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်လို့ စစ်အတွင်းကျဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားစစ်သည် တွေရဲ့ " စစ်သင်္ချိုင်း " နှင့်ပတ်သက်ပြီး အချက်လက်တွေစုစောင်းနေလို့ပါ။
သိပ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပုံတွေအတွေက် မသထုံသူ နှင့် ပုံတွေကို အချိန်ပေးတင်ပေးတဲ့ ကိုခမ်းလှိုင် တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စစ်သင်္ချိုင်း ပုံတွေရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပီအမ် ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။
aprilcold, GreenHat, khanhlaing, KLM, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, Mahuya, Mini_Me, mokenlay, orjawlan, thatonthu, THIHA, ttaswo, winekyaw, Winnermann
02-14-2011 01:44 PM #23
wpfckavmufar;csifvdkUyg/ ck½dkufxm;wJh yHk[mb,frSmawGUvdkU½dkufxm;wmvJcifAsm/
ppftwGif;usqkH;oGm;wJh EdkifiHjcm;om;ppfonf awG&Jh oHjzLZ&yf " ppfocØsKif; " vm; 'grSr[kwf " ppfAdkvf ocØsKif;O,Of " vm; ?
" ppfAdkvf ocØsKif;O,Of " qdkwm owfowf&Sdwmvm; ? 'grSr[kwf 'DESpfcktwlwlbJvm; ?
pdwfr&SdygeJUAsm? wu,frodvdkUyg/ usaemfvkyfaewJh udpöwpfckeJUoufqdkifvdkU ppftwGif;usqkH;oGm;wJh EdkifiHjcm;om;ppfonf awG&Jh " ppfocØsKif; " ESifhywfoufjyD; tcsufvufawGpkapmif;aevdkUyg/
odyfudkwefzdk;&SdwJh yHkawGtawGuf roxHkol ESifh yHkawGudk tcsdefay;wifay;wJh udkcrf;vdIif wdkUudkaus;Zl;wifygw,f/ ppfocØsKif; yHkawG&Sdao;&if xyfwifay;apcsifygw,f/ 'grSr[kwf yDtrf ydkUay;apcsifygw,f/
oHjzLZ&yf ppfocFsdKif; rSmawmh ppfAdkvf ppfom; oD;jcm;rcGJjcm;xm;ygzl;/ r[mrdwf EdkifiHawGtvdkufawmh cGJxm;w,f/
r[mrdwfppfom;awG&JU ppfocFsdKif; tao; wpfck([Hom0wD t0dkif;em;rSm) &JU 0ufqdk'fukdzwfzl;w,f/ tJ'DrSm uG,fvGefoGm;jyDjzpfwJh ppfAdkvfppfom;awG&JU trnfawGudk az:jyxm;ygw,f/ udkvdkeDacwf t*Fvdyfppfwyfu jrefrmppfAdkvf ppfom;awG&JU trnfawGudkawmif tJ'D0ufqdk'frSm awGUzl;w,f/ usaemf jyef&SmawGU&if yDtrfydkUvdkufyghr,f/
aprilcold, fridayborn, GreenHat, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, Mahuya, Mini_Me, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, THIHA, ttaswo, winekyaw, Winnermann
02-14-2011 03:34 PM #24
သံဖြူဇရပ်က စစ်သချိုင်းကပါ ... ကျွန်တော်တောင် ဓါတ်ပုံအများကြီး ရိုက်ခဲ့တယ် .... ၁၉၃၉ ခုနစ်မှားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ... ဓါတ်ပုံတော့ရိုက်ထားတယ် ကင်မရာက ဓါတ်ခဲကုန်နေလို့ ....
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရေတပ် ကြည်းတပ် စစ်သည်တွေရဲ့ အုတ်ဂူတွေပါ..
ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့စစ်သချိုင်းက သံဖြူဇရပ်ကဟာထက် သေးပါတယ် ....
လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်မျိုး ပြောကြည့်လေ ကျွန်တော် ရှာပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပေးပါ့မယ် .. ကျွန်တော် နောက်အပတ် ပြန်မှာပါ မြန်မာနိုင်ငံကနေ .... ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့ဖက်က ကူညီပေးပါ့မယ် ...
aprilcold, fridayborn, khanhlaing, kohtwe, koluchaw, Mahuya, Mini_Me, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, THIHA, ttaswo, winekyaw, Winnermann
02-15-2011 07:28 AM #25
Originally Posted by lagoonaie
စစ်သချိုင်းကို အပေါ်စီးက လှမ်းမြင်ရတဲ့ ပုံ၊ မျက်နှာ မူရာလေးဘက်ဆိုတော့ ပုံလေးပုံလောက်ရရင်ပိုကောင်းမယ်။ တကယ်လို့ အဝင်ဝမှာ လမ်းညွန်မြေပုံရှိရင် အဲဒါတွက်တစ်ပုံ။ အုတ်ဂူ ကဗျည်းစာတစ်ခုချင်းလိုက်ရိုက်နေရင်တော့ ပြီးမယ်မထင်ပါ၊ မဟာမိတ် နိုင်ငံအလိုက်ခွဲထားတယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံအလိုက် အိုဗာအော ပုံတွေရချင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဒေါင်လိုက် အုတ်ဂူ ကဗျည်းစာ ၁၀ ခု + အလျားလိုက် အုတ်ဂူ ကဗျည်းစာ ၁၀ ခု လောက်ပါအောင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ။
မြန်မာပြည်က " စစ်သချိုင်း " တွေကိုတင်ထားတဲ့ဆိုက်တချို့ကြည့်ဖူးတယ် ၊ လမ်းညွန်မြေပုံတွေတွေ့ဖူးပေမယ့် သဘောကျတာမရှိသေးဘူး။ အုတ်ဂူ ကဗျည်းစာတစ်ခုချင်းစီပါတဲ့ စကေးကိုက်မြေပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုလုပ်ချင်တာပါ။ ဒိထက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမှန်းသိပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူးဗျာ။ မြန်မာပြည် " စစ်သချိုင်း လမ်းညွန် + စကေးကိုက် အသေးစိတ် မြေပုံ " လုပ်ချင်တဲ့ အာသီသရှိခဲ့တာ သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် ခုထိ မစရသေးဘူးရယ် ။
aprilcold, khanhlaing, koluchaw, Mini_Me, mokenlay, orjawlan, thatonthu, THIHA, ttaswo, Winnermann
02-15-2011 07:40 AM #26
udkcrf;vdSdKifudk usefwJhyHkawG tcsdef&&if wifay;ygqdkjyD; tckyJ ydkYvdkufygw,f/ usrrSm&Sdwm tukefygyJ/ tcsdefr&vdkY tao;pdwfra&;Edkifao;wmyg/
pmom;av;awGuwckjcif;vdkufzwf&if t&rf;oem;zdkYaumif;w,f/ wcsdKYqdk 20ausmfav;awGrsm;w,f/
ppfwyfawG tvdkufwHqdyfawG uGJaewmav/
aprilcold, fridayborn, khanhlaing, koluchaw, Mahuya, Mini_Me, mrlynn, orjawlan, THIHA, ttaswo, Winnermann
02-15-2011 07:57 AM #27
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒိ ကဗျည်းစာတွေဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ သူတို့ဘဝ သူတို့အကြောင်း သူတို့သမိုင်း သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာ နှင့် သူတို့ မိသားစုအကြောင်း တစေ့တကြောင်း ဖော်ပြနေပါတယ်။ မန်းလေး အမရပူရဘက်မှာ မြန်မာဘုရင်လက်ထက် နိုင်ငံခြားသားတွေကိုမြုပ်နှံရာ သင်္ချိုင်းငယ်လေးတွေမှာလည်း အဲလို ကဗျည်းစာတွေရေးထားခဲ့လေ့ရှိတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကျနော့အမြင်တော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့ထတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။
နို့ ဒါဆို သံဖြူဇရပ် " စစ်သင်္ချိုင်း " နှင့် " စစ်ဗိုလ် သင်္ချိုင်းဥယဉ် " ဆိုတာအတူတူဘဲလို့ မှတ်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့။ ကွန်ဖန်းပေါ့ ဟုတ်လား။
Last edited by mrlynn; 02-15-2011 at 08:10 AM.
aprilcold, fridayborn, khanhlaing, koluchaw, Mahuya, Mini_Me, mokenlay, orjawlan, thatonthu, THIHA, ttaswo, Winnermann
02-15-2011 09:33 AM #28
Thanked 21,542 Times in 736 Posts
စစ်သချိုင်းကို အပေါ်စီးက လှမ်းမြင်ရတဲ့ ပုံ၊ မျက်နှာ မူရာလေးဘက်ဆိုတော့ ပုံလေးပုံလောက်ရရင်ပိုကောင်းမယ်။
tay: pD;u jrif&wJhyHkqdkvdkY *l;*vfuae &SmjyD; "gwfyHkeJY wifay;vdkufw,f/ t&yfrsufESmuawmh ajryHktwdkif;yJ tay:zufu ajrmuft&yf/ uRefawmfwdkY odwmawmh
ppfocsØKif;qdkjyD;awmhyJ odw,f/ ppfAdkvfocsØKif; O,smOfqdkwmawmh b,folrS rac:Mubl;/
'gayr,fh O,smOfav;vdkawmh oyfoyf&yf&yfav;eJY vSaew,fajym&r,f/ aocsifp&maumif;wJh ae&mav;aygh/
tJ'D ppfocsØKif;eJY ywfoufjyD; Mum;zl;wmav;&Sdw,f/ olrsm;ajymvdkY od&wm/ rSm;&ifvnf;rSm;r,faygh/
tJ'DppfocsØKif;udk jyKjyifxdef;odrf;zdkYtwGuf oHjzLZ&yfu rdom;pkwcku tvkyf&xm;w,f/
tJ'Drdom;pku [dk;wkef;xJu rdom;pkvdkuf tpOftqufeJY wm0efajymif;,ljyD; vkyfcJhMuw,fvdkYajymw,f/
tJ'DocsØKif;udk oH&Hk;u 0efxrf;awG ESpfwdkif;vdkvdk vmMuw,f/ oH&Hk;0efxrf;awG vmMuwJhtcgrSm tJ'DrSm tvkyfvkyfay;aewJh rdom;pku EGrf;yg;aewJh tjzpfudkawGYjyD; oH&Hk;0efxrf;awGu pyfpkjyD; ar;Muw,fwJh/
bmjzpfvdkYvJaygh/ olwdkYay;wJh vpmu enf;vGef;vdkYvm; bmvm;aygh/
tJvdkpyfpkMunfhawmh olwdkYudk tvkyform;0efMuD;Xmeu ay;wJhvpmu usyfaiGeJY awmfawmfenf;aewmudk odoGm;a&mwJh/ 6usyfcGJeJY wGufjyD;ay;wmaerSmaygh/ tJ'DrSm oH&Hk;u tvkyform;0efMuD; Xmeudk zdtm;ay;w,fajymw,f/ jyD;awmh olwdkY&JY epfemcJhwJh vkyftm;cawGudk olwdkYrdom;pk pjyD;vkyfcJhwJh tcsdefavmufuae wGufjyD; avQmfaMu;ay;cdkif;w,fajymw,f/ tJ'geJY tJ'Drdom;pkvnf; awmfawmfav; jyefjyD;awmh tqifajyoGm;w,fqdkwmrsdK; oHjzLZ&yfzufu vlwa,mufajymvdkY Mum;zl;w,f/
ygyavum um;av;awmif 0,fpD;EdkifoGm;w,fvdkY ajymw,f/ vGefcJhwJh 16 ESpfavmufwkef;u Mum;cJhzl;wm xifwmyJ/
rl;csifíaomufonfr[kwf aomufae&if;jzifh rl;oGm;jcif;rQom
aprilcold, Botazan, dotekhaowe, fridayborn, khanhlaing, kokokyaik, koluchaw, Mini_Me, mokenlay, mrlynn, orjawlan, ShweTintte, sunny007, thatonthu, THIHA, ttaswo, Winnermann
02-15-2011 11:35 AM #29
]]oHjzLZ&yf ppfocsØKif;}} vdkY ac:qdkygonf/
þocsØKif;ü 1942 rS 1945 ckESpf twGif; *syefppfwyf\_ ppfoHkYyef jzpfcJhMuaom jrefrm-,dk;',m; e,fpyfrD;&xm; vrf;azmufpOf aoqHk;oGm;cJhol NAdwdoQ? MopaMw;vQ? 'wfcsf ppfrIxrf;rsm;ESifh tm&S acR;wyfom;rsm;\_ &kyf<uif;rsm;udk jrSyfESHxm;ygonf/
oHjzLZ&yf ]]aorif;wref &xm;vrf;}} rS &xm;pufacgif;
jrefrmrsm; tygt0if odef;aygif;rsm;pGmaom tm&SvlrsdK; acR;wyfom;rsm;ESifh ppfoHkYyef;rsm;rSm tvGefqdk;&Gm aMumufrufzG,faumif;aom tajctaersm;wGif toa&rJhaom rD;&xm;vrf;udk 13vrQ yifyef;BuD;pGm azmufvkyfcJhMu&onf/ þae&mrS 415uDvdkrDwm uGma0;aom ,dk;',m;jynfwGif;&dS eeffyvm'wft&yfodkY 21vrQom qufoG,f toHk;jyKcJhMuonf/
**** roxHkol&JU "gwfyHkawGudk ulwif ay;vdkufwm jzpfygonf ****
Last edited by khanhlaing; 02-15-2011 at 03:01 PM.
aprilcold, dotekhaowe, fridayborn, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, Mahuya, mokenlay, mrlynn, orjawlan, ShweTintte, thatonthu, ttaswo, Winnermann
02-15-2011 02:38 PM #30
စစ်သချိုင်းမှာ လမ်းညွန် .. စကေးကိုက် မရှိပါ ... မြေပုံတွေဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး ... စကေးသိချင်ရင်တော့
အဲမှာ ရှိတဲ့ အရာရှိကို မေးမှရမယ် ... အရင်တုန်းက အစောင့်အိမ်က ကျွန်တော့်ဆရာမပဲ ဆိုတော့ သွားမေးလို့ရတယ် ... အခုအရာရှိ့်က ကျွန်တော်နဲ့ မရင်းဘူး ... ဓါတ်ပုံသွားရိုက်တော့ မြက်ခင်းကြီးပဲဟာ ..
ဖိနပ်ချွတ်တဲ့ ... မချွတ်ပါဘူးလို့ ... ခင်ဗျား ချွတ်ခိုင်းရအောင် ဆိုင်းဘုတ်လည်း မရေးထားဘူးလို့ ...
မချွတ်ဘူးလို့ .... တောကကောင်တွေပဲ သွားဟောက်လို့ရမယ် ...
Originally Posted by Mahuya
ဟုတ်ပါတယ် ဦးဟူ .. အရင်တုန်းက စစ်သချိုင်းမှာ လုပ်တဲ့လူတွေက ဆင်းရဲတယ် ... အဲလိုပဲ နိုင်ငံခြားက လူတွေကတွေ့ပြီးတော့ မေးတော့ သိသွားတယ် .. အဲနောက်ပိုင်း မြက်ရိတ်တဲ့လူအစ ဒေါ်လာ နဲ့ရတယ် ...
aprilcold, Botazan, fridayborn, khanhlaing, kokokyaik, koluchaw, Mahuya, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, Winnermann